News - Aqoonta aasaasiga ah ee muraayadda
Mashiinka Mashiinka Laba-geesoodka ah
Mashiinka Mashiinka Tooska ah ee Tooska ah
Mashiinka Beveling Glass
Mashiinka Edging Glass
Mashiinka Dhalada Dhalada
Mashiinka Qodista Muraayadda
Mashiinka Edging Glass Qaab
Mashiinka Sandblasting Glass
Aqoonta aasaasiga ah ee muraayadda
Ku saabsan fikradda muraayadda
Muraayadda, waxaa sidoo kale loogu yeeri jiray Liuli Shiinaha hore. Jilayaasha Shiinaha ee Shiinaha waxaa matalaya muraayad. Waa walax adag oo hufan oo qaab qaab dhismeedka shabakad joogto ah marka dhalaalaya. Inta lagu jiro qaboojinta, nafwaayaygu si tartiib tartiib ah ayuu usii kordhaa una adkeeyaa iyada oo aan laga dhigin qaylada. Waxyaabaha ay ka kooban tahay oksaydhka kiimikada ah ee caadiga ah waa Na2O • CaO • 6SiO2, qaybta ugu weynna waa silikoon dioxide.
Muraayaddu kimik ahaan kuma dhex jirto jawiga maalinlaha ah mana la fal gasho noolaha, sidaas darteed waa wax aad u badan. Muraayaddu guud ahaan waa laguma milmi karo aashitada (marka laga reebo: hydrofluoric acid waxay la falgashaa muraayadda si ay u sameyso SiF4, taasoo horseedda daxalka galaaska), laakiin waa lagu milmi karaa alkalis adag, sida cesium hydroxide. Nidaamka wax soo saarku waa in la dhalaaliyo alaabada ceyriinka ah ee sida wanaagsan loo saamiqay isla markaana si dhakhso leh loo qaboojiyo. Molikiyuul kasta ma haysto waqti ku filan oo uu ku sameeyo kiristaalo si uu u sameeyo muraayad. Muraayaddu waa adag tahay heerkulka qolka. Waa shey jilicsan oo adkaanta Mohs ee 6.5.
Muraayadda waxaa markii hore laga helay adkeynta dhagaxyada aashitada ee laga soo saaray fulkaanaha. Kahor 3700 BC, Masaaridii hore waxay awoodeen inay sameeyaan qurxinta quraaradaha iyo muraayadaha fudud. Waqtigaas waxaa jiray quraarad midab leh oo keliya. Kahor 1000 BC, Shiinaha waxay soo saartay muraayad aan midab lahayn.
Qarnigii 12aad ee miilaadiga, muraayadda ganacsiga ee is weydaarsiga ayaa soo muuqatay waxayna bilaabeen inay noqdaan wax warshadeed. Qarnigii 18-aad, si loo buuxiyo baahiyaha soo-saarista telescopes-ka, waxaa la soo saaray muraayadda indhaha. Sannadkii 1873, Beljam waxay hoggaanka u qabatay soo saarista dhalooyinka fidsan. Sannadkii 1906, Mareykanku wuxuu soo saaray mashiin leedh fidsan oo fidsan. Sannadkii 1959, Shirkadda British Pilkington Glass waxay adduunka ugu dhawaaqday in hannaanka samaynta sabeynta ee muraayadda fidsan si guul leh loo soo saaray, kaasoo ahaa kacaan ku yimid geeddi-socodka asalka ah ee durdurista. Tan iyo markaas, iyada oo la warshadaynayo iyo waxsoosaar ballaadhan oo muraayad ah, muraayado adeegsiyo kala duwan leh iyo waxyaabo kala duwan ayaa midba midka kale u soo baxay. Waqtiyada casriga ah, muraayada waxay noqotay mid kamid ah waxyaabaha muhiimka u ah nolol maalmeedka, wax soo saarka, iyo sayniska iyo teknolojiyadda.
Waqtiga dhejinta: Feb-21-2021
Cinwaanka:No.20-8 ee Lunjiao International Mashiinka Mashiinka, Lunjiao Town, Degmada Shunde, Gobolka Guangdong, Shiinaha.